“Ronaldo inta Murayaada hortago isagoo Qaawan ayuu dhihi jiray Messi sidan oo kale……”. – Gool FM
“Ronaldo inta Murayaada hortago isagoo Qaawan ayuu dhihi jiray Messi sidan oo kale……”.
Byare September 11, 2018
(Europe) 11 Sab 2018. Cristiano Ronaldo ayaa la warinayaa in berigii uu joogi jiray Manchester United uu hortagi jiray Muraayada isagoo qaawan isla markaana dhihi jiray ‘Qurux badaniyaa’ sida uu isku cajabiyay darteed.
Dhaliyihii hore ee xulka Qaranka England Peter Crouch ayaa sheekadan daaha uga rogay buugiisa madadaalada sida uu sheegayna wuxuu sheekadan ka maqlay Rio Ferdinand oo ay Ronaldo ka wada tirsanaayeen Man Uited.
“Rio Ferdinand wuxuu noo sheegi jiray sida uu Ronaldo u hor istaagi jiray Muraayada isagoo qaawan, gacmihiisa ayuuna galin jiray tintiisa isla markaana dhihi jiray, ‘Woow. Aad ayaan u qurux badanahay!’”. Crouch ayaa sidaa ku yiri qormadiisa.
Xiddigaha kale ee Manchester United lama dhici jirin Faanka Ronaldo waxayna isku dayi jireen inay ka jajabiyaan oo ka careysiiyaan iyagoo soo qaadi jiray magaca Lionel Messi.
Crouch oo sheekada sii wada ayaa yiri:
“Rio Ferdinand wuxuu yiri ciyaartoyda kale waxay isku dayi jireen inay ka careysiiyaan Ronaldo.
“Lionel Messi ayaa kaa laacibsan.
“Inta garbaha kor u taago isagoo ula jeeda maxaa iga galay ayuu inta dhoola cadeeyo dhihi jiray ‘Ah Haa. Laakiin Messi sidan oo kale uma eka.'”.